Amacandelo okuSebenza kovavanyo oluManyeneyo
Njengaye okanye akunjalo, vumelana nayo okanye hayi, sonke sifanele sifunde kwaye sithathe uvavanyo oluninzi lokukhetha ngexesha elithile ebomini bethu, kunene? Sibahambisa esikolweni esiprayimari ukubonisa ukuqonda kokufunda. Sibahambisa esikolweni esiphakathi ukubonisa urhulumente ukuba sihlangabezana nemigangatho yemfundo karhulumente. Sithatha iimvavanyo ezininzi zokukhetha esikolweni esiphakeme njengeSAT kunye noMTHETHO ukubonisa ukuba silungele ikholeji kwaye siya kuphumelela xa sifika.
Sithatha ekholeji (inkwenkwe, ngaba siyithatha), ukuba idlule iklasi. Ekubeni le mvavanyo ixhaphake, kubalulekile ukuba neendlela ezimbalwa phantsi kweebhanti zethu xa sihlala kwiimviwo. Funda apha ngezantsi, kuba ezi ziphulo zokuhlola ezikhethiweyo ziqinisekileyo kukunceda ufumane amanqaku oyifunayo kuyo nayiphi na uvavanyo othabathayo. Ukuba usenokufunda ukuvavanya, ke ke, nqakraza ikhonkco apha ngasentla ukuze ufunde indlela yokufunda uvavanyo olukhethiweyo lokuqala!
Funda umbuzo ngelixa uphahla iimpendulo zempendulo. Yiza ngeempendulo entloko yakho, uze ukhangele ukuze ubone ukuba ngaba enye yezinto ezikhethiweyo.
Sebenzisa inkqubo yokuphelisa ukuphelisa ezininzi izinto ezingalunganga njengoko unako ukuphendula umbuzo. Izimpendulo ezingalunganga zilula ukufumana. Khangela ukugqithisa okunjengokuthi "akakho" "kuphela" okanye "njalo". Khangela izichaso ezifana nokutshintshwa kwe--1 kwe-1. Khangela ukufana okufana "nokudibanisa" ukuzithoba.
Ukuphelisa ngokuzikhethela iimpendulo ezingalunganga ukuze ungalingeki ukuba ubuyele ekupheleni kovavanyo kwaye utshintshe impendulo yakho. Ngoba? Uza kufunda ngakumbi malunga nokuthembela emathunjini wakho ngomzuzu.
Funda YONKE ukhetho. Impendulo echanekileyo ingaba yinto ohlala uhamba ngayo. Abafundi abaninzi, ekuzameni ukuhamba ngokukhawuleza kuvavanyo, bathambekele ekukhetheni iimpendulo zempendulo endaweni yokuzifunda ngokupheleleyo. Musa ukwenza loo mpazamo!
Yinqamle nayiphina impendulo engafanelekanga ngegrammatic ngombuzo kwi-test yakho yokuzikhethela ezininzi. Ukuba uvavanyo olungenanto lukhangele igama elithile, umzekelo, ngoko nayiphi na umbuzo umbuzo obonisa isibizo esininzi asiyiyo. Ukuba unzima ukuyiqonda, uze udibanise ukhetho lwempendulo kwingxaki ukuze ubone ukuba lusebenza njani.
Thatha uqikelelo olufundwayo ukuba akukho sihlwayo sokuqagela, njengokuba kwakukho kwiSAT . Uya kuhlala ufumana impendulo engalunganga ngokuyinqumla. Ubuncinane uphendule xa uphendula umbuzo.
Khangela iimpendulo zegama. Ngaphandle kokuba uthatha uvavanyo olumiselweyo, impendulo echanekileyo yisoloko ikhethwa ngolwazi oluninzi. Ootitshala bahlala befuna ukubeka ulwazi oluninzi kunokwenzeka ukuze baqinisekise ukuba ukukhetha impendulo akunakuphikiswa.
Khumbula ukuba ukhangele impendulo engcono . Ngokuqhelekileyo, ukhetho olungaphezulu kweyodwa luya kuchaneka ngokuchanekileyo kwiimvavanyo ezininzi zokukhetha . Ngoko ke, kufuneka ukhethe ukuba yeyiphi enye ifanelekileyo kunye nesiqu kunye nomxholo wokufunda okanye ukuvavanya.
Sebenzisa incwadi yakho yokuvavanya okanye ufunde iphepha. Ngokuqhelekileyo kukunceda ukubhala njengomsebenzi wakho, ngoko ubhale phantsi iifomula kunye nokulingana, ukulungisa iingxaki zemathematika , ukucacisa, ukucacisa kunye nokugxininisa ukukunceda ufunde. Sebenzisa iphepha lokukhawuleza ukukunceda usebenze izinto ngokuchanekileyo.
Zizenzele. Ukuba unamathele kumbuzo, uyangqaqa uze uqhubeke. Buyela ekupheleni kokuvavanya ukuze ungachithe ixesha elixabisekileyo kwinto onokuthi ungayifumani.
Thembela umthambo wakho. Ngokuqinisekileyo buyela emva kovavanyo lwakho ukuqinisekisa ukuba uphendule yonke into, kodwa kugcina uphendula ngokufanayo ngaphandle kokuba ufumene ulwazi olutsha kwinqanaba elilandelayo lomvavanyo ukuchasisa impendulo yakho. Chofoza unxibelelwano malunga neenkcukacha malunga nale qhinga!
Ibali leNkcubeko yeBantu "Ndiye ndisebenza kwindlela yokuThutha"
Abasemzini abasuka kwiNtshonalanga - I-Zero kwi-One Mile kwiiveki ezingama-6
I-Batista Biography - Izilwanyana ze-Wrestling Ziba ngumdaka
I-Laptop yam ibebiwe. Ndenze ntoni?